Daawo:Aqoonyahan Cali Darwiish oo ka hadlay saamaynta uu Yeelan karo Qodobada Shirkii Kismaayo | Saadaal Media
Daawo:Aqoonyahan Cali Darwiish oo ka hadlay saamaynta uu Yeelan karo Qodobada Shirkii Kismaayo
Sep 12, 2018 - 1 Jawaab
Aqooneey xaal qaado, ninkaan oranaaya shirka ay Qaswadayaasha kismaayo ku yeesheen waa shir constitutional ah ku lahaa waa yaab’ laakiin waayahan Soomaalida in badan ka mid ah waxaay caado dhigteen wax aysan garaneyn iney ka hadlaan.
Horjoogayaasha ma yeelan karaan ay go’aamo saameyn ku yeelan kara dowladnimada Soomaaliya.
Waxaa jira hal Qodob Oo ku jira Dastuurka qabyada ah kaas Oo dhigaya iney ka wada ka wada hadli karaan sida biyaha, xoolaha daaqsin tooda iwm ah.
Waxaayna so aan gabasho laheyn ugu tumanayaan Dastuurka iyo sharuucda kale ee dalka u taalla.
Kan hadda aqoonta la bidayo waa nin ku nool Mareykanka, hadda a wax uu ka faa’iidey kama muuqato.
Xiriirkaan u jarnay dowladda soomaaliya, waa feker aad u daciif ah waayo waxaa xiriir isku jari kara laba waddan tusaale ka soo qaad soomaaliya iyo waddan kale.
Soomaaliya waa hal waddan, one Nation.
Waxaa jira wax ka yiraahdo National Government and Local Government, sidaa awgeed local government xiriir uma jari karto national government. Waa qaswadayaal ka cabsi qaba in dowladda dhexe soo gaarto gobolada dalka, sida ka muuqato fekerkooda waa dowladda dhexe iney Go’doomiyaan.
Yaa diidan Federalka, yaa diidan dhameystirka Dastuurka, yaa diidan dhismaha ciidamada qaranka, yaa diidan mideynta candhuurta dalka, yaa diidan in la gaarto doorasho hal Qof iyo halCod,yaa diidan iney soo noqoto karaamadii iyo sharaftii ummadda Soomaaliyeed ku laheyd dunida intee da kale. Inta as iyo in kale Oo badan aasaasna u ah dhismaha Dowladnimada iyo soo celinta Qarannimada Soomaaliya waxaa hortaagan waa santa sheydaan iyo kuwo kale Oo media-taxa qaylo la taagan, horeyna ugu soo fashilmay siyaasadda dalka. Kuwii badda iibsaday baa qaylinaya, Kuwii General Gebre farta ugu yeeri jirey baa qaylinaya.
Bini-Aadamku markuu damiir leeyahay waa xishooda’
Bini-Aadamku seddex arrimood waa ku badbaadi karaa: sida Caaqiida, waddaninimada iyo Bini-Aadaminimada, kuwaan ma lahan seddexdaas Astaamood midna, mark haddii aysan shacabka Soomaaliyeed iska qaban, waxaa ka gaari doonaa Mar ka isweydiiyo dowlada iyo Qaran Soomaaliyeed.